Zvemagariro Evanhu Vakakwenenzvera muIllinois Cannabis Legalization Iwe unokwanisa here?
Zvemagariro Evanhu Vakakwenenzvera muIllinois
Chii chinonzi Social Equity Applicant muIllinois?
zveruzhinji kusaenzana chikumbiro Illinois
A Yemagariro Ekuenzanisa Munyoreri muI Illinois inopa makumi maviri muzana yehuwandu hweji yehuwandu hwechikwata che cannabis reisense application.
Nei Illinois Ine Vemagariro Ekuenzanisa Vanyoreri?
Maererano nekutsvaga kwakaitwa mudunhu reIllinois, zvakaonekwa kuti zvairambidzwa kubva kumitemo yakapfuura zvaita kuti zviomere vanhu vazhinji kubatana neindasitiri yechiputa, uye izvi zvakagadzira kusaenzana kwemagariro kuri kuramba kuchikwira zuva nezuva. Iwo mutsva weIllinois mutemo unovavarira kugadzirisa izvi nekugadzira "Vanokumbira Kuenzanisa Yemagariro" kuderedza zvipingamupinyi izvo zvave zvichidzivirira vanhu munguva yakapfuura kuti vapinde maindasitiri nekudaro vachigadzira kusaenzana kwemagariro muIllinois cannabis pamutemo. Zvipinganidzo zvakadaro zvaisanganisira kushayikwa kwemari nekuda kwehurombo, pakati pezvimwe zvinhu.
Zvemagariro Evanhu Vanyoreri Podcast yeIllinois
Kuti uverenge mutemo wekuenzanisa weanoshanda weI Illinois - Click Here
For Yakakanganiswa Yakakanganisika Nzvimbo Mepu - Dzvanya Pano
Nzvimbo Yezvekuenzana Kwemunhu Anokumbira Tsanangudzo muIllinois
"Mumiriri Yemagariro" zvinoreva munhu anonyorera ari mugari wemuI Illinois anosangana imwe yeanotevera maitiro:
(1) munhu ari kunyorera achikwanira kuita makumi mashanu neshanu muzana kubva muzana uye hutongi hwevanhu vakagara kwenguva isingasviki 51 yemakore gumi apfuura mune Imwe nzvimbo Yakakanganisika Impact;
(2) munhu ari kunyorera ari anosvika makumi mashanu neshanu kubva muzana uye utongi hwevanhu kana vamwe vanhu:
(i) akasungwa, akabatwa nemhosva, kana kutongerwa mhosva yekukanganisa mhosva ipi neipi inokodzera kudzingwa pasi pemutemo uyu; kana
(ii) inhengo yemhuri yakakanganiswa;
(3) yevanonyorera vane vashoma vashandi venguva yakazara gumi, munyoreri aine anosvika makumi mashanu neshanu muzana evashandi varipo iye zvino:
(i) parizvino ndinogara munzvimbo ine Zvakashata; kana
(ii) akasungwa, akabatwa nemhosva, kana kuti akatongerwa mhosva yekukanganisa mhosva ipi neipi inofanirwa kuzadzikiswa pasi pemutemo uyu kana nhengo yemhuri yakakanganiswa.
Zvemagariro EmoMunhu Anonyorera Illinois Cannabis Dispensaries
On Gumiguru 1, 2019 - The Nyika yeIllinois yakaburitsa iyo cannabis disensary application. Ichi chishandiso chine mimwe mitauro yakakosha kutarenda rako rezveenzanirana
Kana iye anenge achikumbira anoda kunyorera seMunyori Wezvekuenzaniswa Kwemagariro, mupe humbowo hweMagariro Ekuenzana Kwemunyori. Uchapupu hwechimiro seMagariro Emunhu Mukunyorera anogona kusimbiswa nekupa:
Uchapupu hwechinzvimbo chemunyoreri se "Illinois mugari" sekuratidzwa kwezvinyorwa zvekubatanidza, kana, kana uchinyorera sewe munhu, zvakapfava zviviri pane izvi zvinotevera: (i) chibvumirano chakasainwa chechimiro chinosanganisira zita remunyori, (ii) Chikwereti chepfuma chinosanganisira zita remunyori, (iii) chikoro marekodhi, (iv) kadhi yekunyoresa kuvhota, (v) rezinesi rekutyaira reI Illinois, kadhi reID, kana Munhu ane Disability ID kadhi, (vi) giredhi rekubhadhara, (vii) gwaro rekushandisa, kana (viii) chero humwe humbowo kwekugara kana rumwe ruzivo rwunodiwa kuti ugare pekugara. Munhu anofanirwa kuve akapihwa hutongi hwenyika kwemazuva makumi matatu kuti ave “mugari wemuI Illinois” sekushandiswa kwazvinoita mukushandisa uku.; uye
Uchapupu hwacho munhu kana vanhu vane chake uye vanodzora vanopfuura makumi mashanu neshanu muzana wesangano rakaparadzirwa rekugara vakagara mu Dispropgmentally Impacted Area Kwemashanu emakore gumi apfuura seizvo zvakaratidzwa, asi zvisingagumiri, kuteresa mutero, kunyoresa vavhoti, mari yekubhadhara, dzimba dzekubhadhara, mashanga ekubhadhara, mabhadharo ekushandisa, mafomu einishuwarenzi, kana marekodhi ezvikoro zvinosanganisira mazita emukuru wevashandi or
Uchapupu kuti munhu kana vanhu vane chake uye vari kudzora anopfuura makumi mashanu neshanu muzana wesangano rakaparadzirwa rekugovera rave kusungwa, kubatwa nemhosva, kana kutongerwa mhosva yekuzvidza mhosva yeipi neipi mhosva yakaitwa akakodzera kupfurwa nePublic Act 101-0027. Kana kusungwa, kutongwa, kana kutonga kwakasungwa kana kubvisirwa, ipa zvinyorwa zvezviito zvakadaro; or
Uchapupu hwokuti munhu kana vanhu vane chake uye vanodzora vanopfuura makumi mashanu neshanu muzana wesangano rakaparadzirwa rekugovera rave riina mubereki, muchengeti wepamutemo, mwana, mukadzi kana murume, anotsamira, kana aivimba naiye of munhu ano pamberi paJune 25, 2019, akasungwa, akabatwa mhaka, kana kuti akatongerwa mhosva yeuchenjeri hwese mhosva yaakaitwa akakodzera kudhindiswa nePublic Act 101-0027. Kana kusungwa, kutongwa, kana kutonga kwakasungwa kana kubvisirwa, ipa zvinyorwa zveizvi chiitiko. Munyori anofanirwa kupawo humbowo hwehukama huripo pakati pemukuru wemupostori kana maofficial uye munhu akasungwa, akabatwa nemhosva, kana kutongerwa mhosva yeuchenjeri hwese mhosva yaakaitwa akakodzera kufambiswa nePublic Act 101-0027; or
Hufakazi hwekuti iye anenge achishandisa anoshandisa vashandi gumi venguva yakazara, uye humbowo hwekuti makumi mashanu neshanu kana anopfuura evashandi vanogona kukodzera seVamiriri veMagariro evanhu pasi peimwe remitemo yakapihwa zvinhu 10, 51, ne2 pamusoro, kana vashandi vakaita. ive yavo uye inodzora makumi mashanu neshanu muzana kubva muzana. Iye anonyorera anogona kupa humbowo sezvakatsanangurwa pamusoro apa kune wega mushandi. Munyoreri achazopawo humbowo hwekuti vashandi vaive vachiita basa rakakwana kubva pazuva rakamiswa. Kana ruzivo rwevashandi kana chinzvimbo chevashandi zvachinja pasati kupihwa marezenisi, iye anenge aine basa anofanira kuzivisa Chikamu chekuchinja kweruzivo rwevashandi kana chinzvimbo.
Zvimwe Zvakawanda Zvemagariro Evanhu muIllinois Cannabis
Kunzwira tsitsi Kushandisa kweChipatara Cannabis Pilot Chirongwa Mutemo 2014 Akarasikirwa Nenzanga Yemunhu
Iko kwegore ra2014 Kunzwira tsitsi kushandisa kweChirwere Cannabis Pilot Program Act iyo yakabvumidza kushandiswa kwembanje pakurapa kwakanyanya kudzikisira kune vanhu vanoda kuisa mari muindasitiri yechiputa. Ichi chiitiko chakauya nezvipingamupinyi izvo zvakaita kuti zviomere vanhu kuti vave nemabhizinesi ari muchiitiko ichi. Varidzi vashoma varipo haisi ratidziro yehuwandu hwese hwevanhu nekuti yakavharira chero munhu aive asina zviwanikwa kana kuziva nzira yekutanga bhizinesi mune ino chikamu.
Chirongwa chekuenzanisa vanhu chakavambwa mushure mekunge chirongwa chekutyaira chakawanikwa chichitongwa. Ichi chirongwa chakagadzirirwa kubatsira avo vakatambura zvisizvo nekuda kwekudzora mitemo ye cannabis mune yakapfuura. Chirongwa ichi chakagadzirwawo kubatsira avo vanogara munzvimbo dzakasarudzika nekuda kwekusungwa kwakanangana nembanje nekusungwa. Zvinoenderana nemutemo mutsva.
"General Assembly inoenderera ichitsvaga kuti inofanirwa kuona kuti mutemo uyu wakashandiswa mukuita mutemo uyu kwese kwese."
Iwo Mutemo Mutsva Unokanganisa Sei Mushandirapamwe Wenzvimbo Yemunyori?
Kuzvinyoresa pamutemo kushandiswa kwekunakidzwa nembanje muIllinois kuchabatsira vanhu vese mudunhu, uye kwete vatengi vembanje chete. Mukuda kuona kuti hukama hwakaenzana, mutemo wakagadzirirwa kuita kuti zvive nyore munharaunda dzakasarudzika kuti dziwane marezenisi. Pamusoro pezvo, chero munhu anonyorera kodzero yemagariro zvakaringana anowana zvimwe makumi maviri muzana emakero anopiwa kune vanonyorera. Idzi pfungwa dzinoiswa mumakirasi akasiyana kune vanonyorera kune vane mamiriro ezvinhu ekudyara nzvimbo, hukasha hunokura, kana ma disensaries.
Zvinoenderana nemutemo, mutsigiro wevanhu vakaenzana vanogara chero munhu anogara muI Illinois, achigara munzvimbo isingafarirwe nehurumende kwemakore anokwana mashanu apfuura. Idzi ndidzo dzinowanzo nzvimbo dzinosungwa zvakawanda, kusungwa, nekuiswa muhusungwa zvichitevera kutyorwa kwechiitiko checannabis munguva yakapfuura. Avo vane zvinyorwa zvinodzingwa pasi peichi chiitiko vanokodzerawo hukama hwemagariro.
Ndedzipi Dzimwe Nyaya Dzemagariro Evanhu Dzichagadziriswa Uyu Mutemo?
Bhiri iri richatarisisa kodzero dzevashandi vari muindasitiri yechiputa. Kusiyana nakarekare uko vashandi vemu indasitiri yemanje vakasarurwa, ivo zvino vachanakidzwa nedziviriro yakafanana nevashandi mune mamwe maindasitiri.
Zvakadiniko nezveI Illinois Bhizinesi Yekuvandudza Bhizinesi?
Sekureva kweI Illinois 'itsva yemutemo cannabis pamutemo, "Kunogadzirwa mune State mari muhombe chikwereti, icho chichaitwa chakaparadzaniswa uye kunze kwemamwe ese State mari, kuti azivikanwe seCannabis Bhizinesi Rekuvandudza Bhizinesi".
Iyi kitty yakakosha yakarongedzerwa avo vanoda kupinda muindasitiri yemanje. Iyo kitty yakagadzirirwa kushandiswa kushandiswa mari, kutsigira, uye kuita kuti zvive nyore kune vanhu vanofarira kujoinha indasitiri yembanje asi vanoshomeka nekuda kwemari.
Dzimwe nzira dzekuti mari iyi dzichabatsira dzinosanganisira:
Kupa zvikwereti nemari yepasi yemari yemari. Izvi zvikwereti zvichashandiswa nevanhu vezvekudyidzana vanoita basa rekuvaka mabhizinesi e cannabis chero bedzi vachinge vaine marezinesi zvichienderana nemutemo.
Kupa rubatsiro kune vanobatana nevamwe vezvekudyara vanogona kunge vangada kutanga nekuita bhizinesi dze cannabis asi vasina ruzivo rwemari kuzviita.
Kubhadharira kuwanikwa kune chinangwa chekubatsirana vanhu vanoita zvehupfumi
Kubhadhara kutsvagirwa kwakagadzirirwa kukurudzira kutora kwevakadzi, vakaremara, uye mapoka madiki mukati mevanhu.
Nei iyo Yemagariro Ekuenzana Chirongwa Yakanaka Idea
Vaya vakasungwa kana kusungwa vanowanzotambura nekusingaperi kwenguva refu zvakaipa zvakaipa. Izvi zvinodaro nekuti vazhinji vashandirwi havazoshandira munhu chero rekodhi, nepo vamwe vanongosarura vaanotongwa. Muchokwadi, avo vakasungwa munguva yakapfuura nekuda kwekunge vaine mbanje vanoramba vachitambura kunyangwe mushure mekushandiswa kumwechete kwaitwa pamutemo. Varoora, vana, uye hama dzevakabatwa vanotambura zvakare mune zvemari uye nepamoyo kana hama yavo ichienda kujeri.
Iyi purogiramu inopa ese maviri rezenisi chikumbiro uye rubatsiro rwemari kune vanhu vakakanganisika nemitemo ye cannabis-inoenderana nekusimbisa kana zvakanangana.
Ndiani Anokodzera Kunyorera Zvemagariro Evanhu?
Vemagariro ezvekuenzanirana vanhu ndevaya vanosangana nezvinodiwa zvishoma kuti vakwanise kuwana rezenisi rekutengesa mbanje mukati mehurumende. Zvimwe zvezvinodiwa izvi zvinosanganisira:
Munhu anogara munharaunda inokodzera kufarikanywa kwenzanga. Kugara mune ino nyaya kunoreva kuve nechikwereti chakasainwa chine zita remunyori kana reti yezvivakwa.
Kadhi revavhoti, rezenisi rekutyaira, mubhadharo, uye chero fomu yekodhi yekuzikanwa ichashandiswa kuona kugara.
Ko Iwo Mutemo Unotii Nezve EX-Kutendeuka?
Avo vakashanda nguva yekutora mbanje uye nekushandiswa vanofungwawo mumutemo. Zvinoenderana nemutemo mutsva weIllinois, kana imwe chete mhosva yaiswa chisimbiso kana yabvisirwa mari, mushandi haazofaniri kuburitsa mhosva yake yapfuura kune waanogona kushandira. Izvo zviri kutaurwa, mutemo hauna kugadzirwa kudzikamisa mushandirwi sekureva mabasa. Mushandirwi achiri nemvumo yekutarisa kumashure uye kutevedzera maitiro mamwechete avanoshandisa kune vamwe vashandi.
Unoitei Kana Iwe Ukakodzera Kubatsirwa Kubva kuSocial equity Provision?
Hapana mubvunzo kuti iyo indasitiri ye cannabis inobhadhara. Kana iwe uchida kumisa bhizinesi muindasitiri ino uye uchikwanisirwa kutaridzika kwemagariro, unofanirwa kufunga zvekutumira fomu rako pasi pechikamu chezvekudyidzana kwevanhu.
Kana iwe uine rombo rakanaka, iwe unogona kunyorera kwete kungobvumidzwa chete asi iwe unogona kubatsirwawo nemari yenyika iyo inogona kuisa bhizinesi rako ichizunza nekuisa pamberi pemakwikwi. Nhau dzakanaka ndedzekuti mari yacho haingori yakanyanya kudhura asi mukati mekusvika kwevanotambura vagari muIllinois.
Bata negweta rinokodzera cannabis kana iwe usina chokwadi nemafambisirwo esarudzo, kana iwe usingazivi nzira yekubatsirwa nayo zvakanakanaka kubva kune ako nzanga mikana yezve nzvimbo.
Kwemagariro Ekuenzana Kwevanhu
Chii pamusoro, Ini ndiri Tom - ndiwane na googling Cannabis Gweta, wobva wadzvanya webhusaiti rangu, cannabis indasitiri gweta.com. Chinyorwa chepamhepo chemibvunzo yako yese pamusoro pekufambisa iyo indasitiri ye cannabis - kufanana nemazuva ano anopisa musoro muIllinois - Nzvimbo Yezvekuenzaniswa Kwemagariro
Tichapinda mairi chaizvo uye iwe unozoziva mutemo uyu zviri nani kupfuura 99% yevanhu kana ukatarisa kusvika kumagumo, pfungwa dzakaputika zvinhu ipapo - asi nemirairo yeYouTube, ndinofanira kukuyeuchidza kuti ufarire uye unyore.
Chikamu chechinomwe cheMutemo chine chekuita nevanhu vanoita zvehunyanzvi - asi isu hatigone kungodzikaira imomo chete - chekutanga tinoda kuongorora tsananguro chaiyo yemunyaradzi pamutemo pasi peI Illinois mutemo - kune isu tiende kune zvinotsanangurwa.
"Munyori Wezvekuenzaniswa Kwemagariro" zvinoreva munhu ari kukumbira ari mugari wemuI Illinois anosangana neimwe yeanotevera maitiro:
Wakaona mutsauko here - makambani madiki anoda ese maviri "umiriri uye kutonga" kweanodiwa veruzhinji kunyorera, asi makambani makuru anongoda huwandu hwevashandi huwandu. Ipapo iwe unogona kuchengeta kutonga uye maneja zvisinei iwe unoda.
Kune rimwe divi, bhodhi revatungamiriri - varidzi uye vatongi vekambani vanozoita timu yekuvaka timu - uye vasingamirire kuti vabatsire pane izvozvo.
Izvozvi zvatinoziva izvo Mushandirapamwe Wekufananidza Chikumbiro - nei isu tichida kuva mumwe wavo? Nekuti mutemo unovafarira munzira mbiri dzakajeka: 2) nekupa anokwana makumi maviri muzana ezvigaro zvekupaza mawanendi uye hunyanzvi kukura manyorero uye 1) nekupa mukana wekudzika kwemitero yakaderera yehurumende kudzikisa zvipingamupinyi zvekupinda mumusika we cannabis wepamutemo. .
Chikamu 7-10 cheiyo nyowani mutemo we cannabis inogadzira Cannabis Bhizinesi Yekuvandudza Bhizinesi kuti ripe zvikwereti zvemitero yakaderera kune vanoita zvebhizinesi equity kubhadhara mari yebhizinesi inodiwa kushanda bhizinesi ravo re cannabis.
Kupfuurirazve, rubatsiro ruripo kune "vanokwanisa vanoshanda munharaunda chikumbiro" kubhadhara kune zvakajairika uye zvinodikanwa mari yebhizinesi kutanga uye kuita bhizinesi ravo re cannabis.
Chii chinonzi "anokwanisa munharaunda yekuenzana" Isu tinodzokera kune zvakatsanangurwa kuti tiwane iri:
“Anokodzera Kuenzaniswa Kwemagariro Emunhu” zvinoreva kuti Mushandirapamwe Wekuenzaniswa Kwemagavhuna Akapihwa rezinesi pasi pemutemo uyu kushandisa chitambi chebhokisi re cannabis.
Hukuru - chii chinonzi "rezinesi rezinesi"?
"Conditions Adult Use Dispensing Organisation License" zvinoreva rezinesi rinopihwa kune avo vari pamusoro-vanopa chikumbiro kune Adult Use Dispensing Organisation License inochengetera kodzero kumunhu mukuru yekushandisa kupa vanhu rezenisi rezenisi kana iye anenge achizadzisa mamwe mamiriro anotsanangurwa muMutemo uyu, asi asingakodzeri. anogamuchira kuti atenge kutenga kana kutengesa cannabis kana cannabis-yakarongedzwa zvigadzirwa.
Zvakanaka, chikamu chakawanikidzwa, asi chisati chavhurika - Coool ... iwe unogona kuedza kuwana rubatsiro kana yako Social Equity chikumbiro chinzvimbo ikakuwanira rezinesi ... wozobva wonyorera mabhenefiti… wobva wavaka wozovhura .. Tinogona here kukura cannabis uye kuwana rubatsiro? Ngationgororei.
Ah inotonhorera, kune iyo mamiriro ekukurima rezinesi.
“Conditions Adult Use Cultivation Center License” zvinoreva rezinesi rinopihwa kune avo vanonyorera chikumbiro kune Adult Use Cultivation Center License inochengetera kodzero yeAdult Use Cultivation Center License kana iye anenge achikumbira asangana nezvimwe zvinoenderana nezvinotarisirwa nebazi rezvekurima maererano nemutemo. , asi haikodzeri uyo anogamuchira kuti atange kukura, kugadzirisa, kana kutengesa cannabis kana zvinogadzirwa necannabis.
Zvakanaka mangani marezinesi aripo? 30 - Kutonhorera, asi mirira vatambi varipo vanogadziriswa, saka vangani vari iwo, makumi maviri neshanu, zvakanaka isu tiri pasi pagumi.
Zvakanaka pamwe zvakatoipa kupfuura izvozvo nekuti,
Chikamu 20-15. Mamiriro ezvinhu Evakuru Shandisa Cultivation Center application. .
Saka pakushanda kwakanaka kwevanhu vakuru kurima kuti kuitike, zvinopfuura izvo gumi zvino zvavepo zvinoda kuuya pamhepo, bummer, saka isu ngatimbotarisaiwo kune avo ma dispensary grant tiwone kuti ndedzipi mhando dzemari dzinowanikwa.
(c) Zvikwereti zvakaitwa pasi pechikamu ichi:
(1) ichaitwa chete kana, mumutongo weDhipatimendi, chirongwa ichi chichienderera mberi zvinangwa zvakatsanangurwa muMutemo uyu; uye
(2) ichave iri mumutero wakakura uye fomu uye iine zvirevo zvakadaro maererano nechengeteko, inishuwarenzi, kushuma, mhosva dzehumwe, kurapwa kwekutadza, uye zvimwe zvinhu sezvo Dhipatimendi richasarudza yakakodzera kuchengetedza ruzhinji rwevanhu uye kuwirirana. nezvinangwa zveChikamu chino. Iwo mazwi uye zvaunopihwa zvinogona kunge zvichishoma pane zvinodiwa pakwereta dzakafanana dzisina kufukidzwa neChikamu ichi.
(d) Zvikwereti zvakagadzirwa pasi peChikamu chino zvichapihwa mumakwikwi uye gore roga roga pasi peGrant Accountability uye Transparency Act. Zvikwereti zvakagadzirwa pasi peChikamu chino zvichawedzera nekusimudzira zvinangwa zveMutemo uyu, zvinosanganisira kusimudzira Vezvekudyidzana Kwemagariro, kudzidziswa kwebasa uye kuvandudza kwevashandi, nerubatsiro rwehunyanzvi kune veSocial Equity Applicants.
Saka izvo zvinotisvitsa kumubvunzo - isu tinoita zvinyadzo zvakanakira, saka isu tinoda kuve nenzvimbo dzekuenzaniswa kwemagariro, asi isu tinopinza chirongwa chekunyora chekupiwa mumashandisirwo - tinotenda kuti iwe unofanirwa kuwedzera iwo mapepa.
20% yekushandisa kwako iri kuenda kwauri semunyaradzi wezvekunyorwa equity. Asi zvinoita sekunge vanhu vazhinji vanokodzera, vanopfuura mazana masere ezviuru akavhurika kuti vadzingwe pasi pemutemo, uye vanhu vanogara munharaunda dzakashatiswa - asi iyo dispensary yako inounza chii munharaunda iyoyo kubatsira kugadzirisa matambudziko ehondo yezvinodhaka? Heino ndipo apo iyo iyo iyo nyaya yekambani yako inogona chaizvo kubudirira uye kuunza yakanaka shanduko munharaunda.
Izvi zvinoda kuenda muchirongwa chako chekudzidziswa uye nharaunda inosvika. Fungidzira kana iyo yako disensary inotsigira kukurudzira uye basa rakanaka gore rega? Mukudyidzana pamwe nemunharaunda bar masangano uye cannabis mabhizinesi anoda vashandi vakadzidziswa.
Izvi ndizvo zvinhu izvo kambani yako - kunyanya kana uchienda kune yenzvimbo dzekuenzanirana nzvimbo - inofanirwa kufunga nezvekuisa pamwechete kwayo cannabis rezenisi rekushandisa.
Iwe unobhengi pamakwereti? - hazviite. Iwe hautombopihwa chikwereti, kana kupihwa - iwe unofanirwa kukodzera. Iva nemari mune akarongeka nenzira. Izvo zvinoshandiswa zvichave zvichidhura kutumira nekuda kwekukura kwavo - uye zvisinei izvo vamwe vanhu vangangotenda, magweta anofanirwa kubhadharwa nenguva yavo uye basa. Kunyanya kana gweta rako richitengeserana rakaringana kuti riwane zvipiriso zvakazvimirira zvisingasviki mamirioni mashanu emadhora uye masheya anodikanwa ekuwedzera chikamu nevanyori vezvekuenzanisa
Kutenda nekundibatanidza pane ino episode - yeuka, mbanje pamutemo ingori nemwedzi mishoma - saka tanga kuisa zvirongwa zvako pamwe chete kuma dispensaries & Kunyoresa kuti utaure kusvika ikozvino. Uye kana iwe uchida rubatsiro rwangu, ingo google cannabis Gweta uye ugosangana neni. Ndokuwona manje manje.
Tsitsi Kushandisa kwekurapa Cannabis Pilot Chirongwa Act 2014
The 2014 Kunzwira tsitsi kushandiswa kwekurapa Cannabis Pilot Chirongwa Mutemo izvo zvaibvumira kushandiswa kwembanje yekurapa kwaive kudzikisira zvakanyanya kuvanhu vaida kuisa mari mumaindasitiri embanje. Ichi chiitiko chakauya nezvipingamupinyi izvo zvakaita kuti zviomere vanhu kuti vave nemabhizinesi ari muchiitiko ichi. Varidzi vashoma varipo haisi ratidziro yehuwandu hwese hwenyika nekuti yakavhara chero munhu asina zviwanikwa kana kuziva nzira yekutanga bhizinesi mune ino chikamu.
Chirongwa chekuenzanisa vanhu chakavambwa mushure mekunge chirongwa chekutyaira chakawanikwa chichitongwa. Ichi chirongwa chakagadzirirwa kubatsira avo vakatambura zvisizvo nekuda kwekudzora mitemo ye cannabis mune yakapfuura. Chirongwa ichi chakagadzirwawo kubatsira avo vanogara munzvimbo dzakasarudzika nekuda kwekusungwa kwakanangana nembanje nekusungwa. Zvinoenderana nemutemo mutsva. "General Assembly inoenderera ichiona uye kuti inofanirwa kuona kuti mutemo uyu wakashandiswa mukuita mutemo uyu."
Mutemo Mutsva Unobatsira Sei Nharaunda?
Kuzvinyoresa pamutemo kushandiswa kwekunakidzwa nembanje muIllinois kuchabatsira vanhu vese mudunhu, uye kwete vatengi vembanje chete. Mukuda kuona kuti hukama hwakaenzana, mutemo wakagadzirirwa kuita kuti zvive nyore munharaunda dzakasarudzika kuti dziwane marezenisi. Pamusoro pezvo, chero munhu anonyorera zvehukama munharaunda anozowana makumi maviri nemashanu mabhonasi emakona. Aya mapipi achaiswa mumakirasi akasiyana kune vanonyorera vane hukama hwemagariro uye avo vanogara muIllinois.
Ndedzipi Dzimwe Nyaya Dzemagariro Dzinotevera Mutemo?
Zvakadiniko neBhizinesi Yekuvandudza Bhizinesi?
Zvinoenderana nemutemo uyu, "Panogadzirwa muhomwe mari yeHurumende homwe inokosha, iyo ichaitwa zvakasiyana uye kunze kwemamwe mari ehurumende, inozivikanwa seCannabis Business Development Fund".
Bata ne a anogoneka cannabis magweta kana iwe usina chokwadi nezve maitiro ekushandisa kana kana iwe usingazivi nzira yekubatsirwa nayo zvakanakisa kubva kune yako nzvimbo yekuenzanisa yenzvimbo.